के आँखा सुन्निनु र खुट्टाका छालामा समस्या देखिनु कोरोनाका लक्षण हुन् ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार के आँखा सुन्निनु र खुट्टाका छालामा समस्या देखिनु कोरोनाका लक्षण हुन् ?
के आँखा सुन्निनु र खुट्टाका छालामा समस्या देखिनु कोरोनाका लक्षण हुन् ?
२०७७, १० बैशाख बुधबार ०९:०१
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । यसैबीच, चिकित्सक तथा अन्वेषकहरूले कोरोनाबारे नयाँ तथ्य पत्ता लगाउन लागिपरेका छन् । कोभिड–१९ नयाँ भाइरस भएकाले अहिलेसम्म पूर्ण तथा ठोस जानकारी उपलब्ध नभएकाले औषधि निर्माण र नियन्त्रणमा समस्या आइरहेको छ।
अहिलेसम्मको अध्ययनअनुसार, कोरोनाकोे संक्रमण भएमा रुघाखोकी, ज्वरो, थकाइ लाग्ने, मांशपेसीको दुखाइ र श्वास–प्रश्वासमा समस्याजस्ता लक्षण देखिन्छन् । तर, वैज्ञानिकहरूले गरिरहेका अध्ययनअनुसार, पछिल्लो समय स्वाद थाहा नपाउने, आँखा सुन्निने वा गुलाबी रङ देखिने र खुट्टाको औलाका छाला रातो हुने तथा घाउ देखिनेजस्ता लक्षणसमेत देखिएको पाइएको छ ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार कोरोनाका बिरामीमा स्वाद थाहा नपाउने, आँखा सुन्निने वा गुलाबी रङ देखिने र खुट्टाको औँलाका छाला रातो हुने तथा घाउ देखिनेजस्ता लक्षणसमेत देखिएको छ।
– कन्जाक्टिभिटिज आँखा सुन्निने समस्या हो । यो आँखामा हुने एक किसिमको पातलो टिस्यु हो जसले आँखाको सेतो भागलाई ढाक्ने र आइलिडमा रेखा बनाउने काम गर्छ । कन्जाक्टिभिटिज हुँदा आँखा रातो हुने, चिलाउने र आँसु बग्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन् । यो भाइरस वा त्यसको संक्रमणको कारणले हुने गर्छ ।
– कोरोना संक्रमितले आँखा छोएमा यसको भाइरसले आँखामा समस्या सिर्जना गर्छ । आँसुको माध्यबाट भाइरस संक्रमितबाट अन्य व्यक्तिमा सर्न सक्छ । ‘गामा नेत्र विज्ञान’ले दिएको जानकारीअनुसार, पछिल्लो समय कोभिड–१९ का बिरामीमा आँखामा समस्या देखिएको छ । नाकको स्वाब लिएर परीक्षण गरिएका एक संक्रमितको आँखामा पनि समस्या पाइएको थियो । यस्ता बिरामीमा आँखा सुन्निने र पानी भरिने समस्या हुने गर्छ ।
खुट्टाको छालामा समस्या
– स्पेन, फ्रान्स र इटालीका चिकित्सकका अनुसार, कोरोना संक्रमितका बिरामीमा खुट्टाको औँलाका छाला सुन्निने, रातो हुने र घाउ देखिने गरेको छ । पोडोलोजिस्टको अन्तर्राष्ट्रिय संघको रिपोर्टअनुसार, कोरोना संक्रमण देखिएका १३ वर्षीय बालकको खुट्टामा ससाना घाउ देखिएका थिए । पछि बालककी आमा र बहिनीमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ।
– इटालीको अस्पतालका बिरामीमा गरिएको अध्ययनअनुसार २०.५ प्रतिशतमा खुट्टाको छालामा समस्या देखिएको थियो । सामान्यतया, छाला सुन्निने र घाउ आउने समस्याबारे वैज्ञानिकले थप अनुसन्धान गरिरहेका छन् । एक्कासी खुट्टाको औँला र छालामा समस्या देखिएमा चिकित्सकसँग सल्लाह लिन चिकित्सकले आग्रह गरेका छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
Previous articleदुई नर्सको आरडिटी पोजेटिभ, नमुना पीसीआर परीक्षणमा पठाइयो
Next articleविश्व स्वास्थ्य संगठनकाे चेतावनी- ‘कोरोना भाइरसले अझै खराब स्थिति निम्त्याउनेछ’